WAXAAN U ADEEGSANAA SLURRY FOR NAFAQADA DHIRTA - SOOSAARKA DALAGGA
Waxaan bacriminnaa xayawaanka beerta iyo khudaarta cagaaran
Bannaanka cagaarsho ahaan waxay door bidaan Bacriminta dabiiciga ah. Beeraha gaarka loo leeyahay waa mid raqiis ah oo badbaado leh kaas oo gacan ka geysanaya la dagaallanka beergooyska. Laakiin waxaa muhiim ah in la ogaado sida loo faragaliyo "organic", iyo inta ay le'eg tahay. Aynu aragnno faa'iidada xawaaraha ee goobta.
Tilmaanta iyo ka kooban bacriminta
Slurry waxaa loola jeedaa xeryaha dufanka nitrogen-potassium. Hadafka xalka waa biyaha (98.5-98.8%). Isugeynta celceliska potassium waa 0.45%, halka nitrogen uu yahay 0.25%. Laakiin fosfooraska aad ayuu u yar yahay: 0,01% mugga. Waxyaabaha firfircooni waa HOL.
Potassium iyo nitrogen, Sidaa darteed, si fiican u milmaan oo si fiican u nuugay by dhirta. HOLO Nitrogenous, oo ka falcelisa tallaalka urobacterium, si dhakhso ah u boodaa ammonium carbonbon. Isla mar ahaantaana, si dhakhso ah ayey u uumi baxdaa, sidaas daraadeed isku dhafka isku dhafan (sidaas darteed, dareeraha waxaa lagu hayaa weel xiran).
Waa muhiim! Si aad u tirtirto substrate adag si dhakhso ah, dareeraha ayaa kiciya 2-3 maalmood oo kasta.
Xaaladaha kaydinta waxay wax ka beddeli karaan qiimaha xalka: nitrogen isku mid ah wuxuu "hoos u dhigi karaa" qiyaasta 0.02% ama, si tartiib ah, "boodaya" ilaa 0.8%. Tani waxay la dhacdaa potassium - content wuxuu ku kala duwanaan karaa 0.1% si aad u fiican 1.2%.
Isagoo ka hadlaya waxa xoqan yahay, waxaa habboon in la sheego hal wax kale: marka la eego waxtarka waxsoosaarka dhirta, sida daaweyntu waxay u dhowdahay biyaha macdanta marka loo eego xeryaha dabiiciga ah.
Sida loo helo iyo u dukaameysi
Bacriminta caan ku ah iyada oo ay ugu wacan tahay sahlan diyaarinta. Laga soo bilaabo remaent waxaad u baahan tahay oo kaliya weelasha weelasha waaweyn. Ugu fiican ee ku haboon dhulka in foosto foosto halkii 100-200 litir. Meelaha "Ground" waa kuwo ku habboon, tusaale ahaan, tuubo.
Waa kuwan liiska maaddooyinka:
Weelku wuxuu ka buuxsamaa qiyaastii 1/3 mugga digada oo ka buuxsamey biyaha ilaa sare. Ka dibna ku dar superfosphate (50 g halkii 10 b baaldi). Ash waxay u baahan doontaa dheeraad ah - 1 kg / 100 l oo dareere ah. Dhammaan tani waa si isku dhafan, iyo foosto daboolay filim dabool ah oo dhagan. Sii diyaarso 10-14 maalmood, kareyso marmar. Isla mar ahaantaana cayayaanku waa inaysan ku dhicin xabada.
Ma taqaanaa? Sanadkii 1775, buugga Fiisooyinka A. Aagga Bolotov, "On bacriminta dhulka", ayaa la daabacay, kaas oo faa'iidooyinka isticmaalka Bacriminta digriiga ku salaysan la cadeeyay.
Bacriminta waxaa badanaa lagu hayaa hooska. Maalmaha kulul, halsano waa firfircooni badan, laakiin ka-saarista ka dib, badi nitrogen ayaa si fudud u dillaaci doona. On site ah meesha ugu fiican noqon lahaa foorno taagan agta.
Digada waxaa loo isticmaalaa sida ugu muhiimsan, inta badan lo'da. Waxaad qaadan kartaa oo aad doofaarka u tahay - waa wax aad u jilciya nitrogen (marka hore 0.31% marka loo eego 0.09% mulinka).
Codsiga bacriminta dabiiciga ah
Ka hor inta aanad quudin, waa in aad ku qoyso biyo nadiif ah. Tani waa tallaabo lagama maarmaan ah - haddii aad ku shubtid oo kaliya dareenka diyaarsan, xididdada ayaa si fudud u "gubi".
Waxaa loo isticmaalaa labadaba qaab saafi ah iyo waliba qayb ka mid ah compost. Isla mar ahaantaana, horeba peat qalalan waxaa ku shubtay digada dareere ah (halkii 1 kg ee peat waxay qaadanaysaa 0.5 ilaa 2 litir oo dareere ah). Waxay tixgelisaa nooca carrada iyo xaaladda. Si aad u iftiin leh, carradu si fiican u jilciya, diirada ayaa muhiim u ah, halka dhulka la sii deynayo xumbada kalluunka ayaa u baahan qiyaasta ugu yar, iyo beeralayda qaarkood waxay diidaan inay isticmaalaan habkan.
Waa muhiim! Maaddada cusub waxay waxyeello u geysan kartaa dhirta dhirta. Waxay udhaxeeyaan sidii ay ku adkeysan lahaayeen, sidaa daraadeed dareeraha dhowr toddobaad ka badan.
Waxay dhacdaa in peat uu yaryahay acid. Tan waxaa lagu saxay iyadoo lagu darayo 1% lime.
Sida loo xakameynayo, waxaan hore u ogaanay, si toos ah u raac codsiga halabuurka.
Bannaanka u ogaadaan in bacriminta iyo quudinta badan oo la isticmaali karaa sanadka labaad ee koritaanka.
Dhoobada waxaa lagu shubaa goobo qumman oo leh qaboojiyeyaal. Waxay isku dayayaan inay wax yar sameeyaan si qaybta nitrogen ay ugu dhawaato rhizome. Daaweynta Tani waxay la sameeyaa guga, ka hor inta ubax. Biyaha waa "isku dhafan" leh (5 litir 1 l oo miisaaniyadeed, 1/6 waa suurtogal) oo si siman ku shubtay qiyaasta 10 litir 1 kiilo M oo ah geedka yaryar ee podstvolnoy. Geedka gaboobay ee laamaha horumaray wuxuu u baahan doonaa laba jeer oo dheeraad ah, laakiin aan laheeyn fanaani.
Goobaha saboolka ah, diirada ayaa la kordhiyay 1.2-1.5 jeer, halka ciidda si fiican loo hayo loo qasi karo.
Quudinta labaad waxaa la sameeyaa marka caleemaha sanadlaha ah ay kor ugu kaceen. Haddii ay sidaas oo kale tahay mid aan ku filnayn, ka dib 35-40 maalmood ka dib waa inay ahaataa mid kale.
Ma taqaanaa? Waxyaabaha muhiimka ah ee horumarinta sayniska ciidda waxaa sameeyey V. Dokuchaev, oo muddo 6 sano ah (1888-1894) wax ka bartay carrada gobolka Poltava. Iyadoo ku salaysan, khariidado faahfaahsan oo qotoma ayaa la sameeyay, iyo hababka cilmi-baarista ee qoraagu uu weli yahay.
Waxaa jira hal caan oo kale: geedo geedo dhagax ah oo quudiya wareegyada wareegga 2 illaa 5 sano, noocyada kale (tufaaxa, pear ama cherry) ma jiro "shuruudaha". Iyadoo da'da, waxay si fiican u dulqaadan karaan xeryahooda.
Nadiifinta beerta waxaa loo isticmaalaa si qumman, "shoog" quudinta ayaa la sameeyaa 2-3kii sanoba mar, halka slurry loo isticmaalo badanaa badanaa. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in qadar badan oo substrate qallalan ay hoos u dhigi karaan kobaca.
Dalagyada beerta ugu weyn waxay u dulqaadanayaan dharka sare, gaar ahaan nooca bocorka. Laakiin digirta, digir iyo radishes ee waraabinta noocan oo kale ah waa mid aan kala go 'lahayn, iyo bannaanka u badan ma ku darto iyaga oo u daadi. Tani waxay sidoo kale khuseysaa kaabajka kohlrabi.
Nooc kasta oo dhir ah wuxuu leeyahay tignoolaji u gaar ah. Inkasta oo ay ka wanaagsan tahay in la dhimo ka dib waraabinta badan.
Haddii aadan haynin, oo aad weli u baahan tahay inaad quudiso dhirta, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho Bacriminta iibsan sida Qorshaha, Crystalon, Ammophos, potassium sulfate, Zircon, Tilmaamo Saxaax, HB-101, Trichoderma weidea, Kemira, Siyanie-2, Biohumus , Nitrateum potassium, Vympel, Ovaryar
Qajaarka waxay ubaahan tahay dhajis ka dib 2 toddobaad, isku dhafka biyaha ee saamiga 1:10 waxaa lagu shubay 1 litir ka yar baadiyaha. On baaldi ah ee dareeraha, waxaad ku dari kartaa 1 qaado oo ah superphosphate ama sulfate potassium. Qadarka isku mid ah ee zucchini dhalinyarada iyo bocorka.
Waa muhiim! Iyada oo hoos imanaysa xaddiga qaddar badan oo xalka ah, dhirta ayaa hoos u dhigi kara kobaca, caleemahooduna waxay dhacaan mar dambe. Waa muhiim in la ogaado nooca carrada iyo diiradda xaalada.
Bilowga ugu horreeya ee tamaandhada waxaa la sameeyaa 10 maalmood ka dib beerashada dhulka. Qiyaas ahaan 10-14 maalmood (taas oo ah, ka hor ubax) mar kale ku shubtay. Qadarka ugu sarreeya waa 0.5 litir oo xal ah oo hoos yimaada baadiyaha.
Waqtiga ugu fiicani ee hordhaca koowaad ee kaabajka - 2 toddobaad ka dib markii la beerto (isla 0.5 litir oo ka yar baadiyaha). Dhowr isbuucyo waa in dib loo daaweeyo. Marka la eego noocyada dambe iyo khadadka dhexdhexaadka ah, waa wax yar oo ka sii adag - 2 todobaad ka dib codsiga labaad, 1.5 litir oo dareere ah ayaa hore loogu shubay geedka hoostiisa, isagoo horay ku daray 30 g superfosphate ilaa 10 litir.
Waayo, qaansada ayaa raacaya qorshaha 2-3aad ee 1 sq.m. Waqtiga ay tahay May - tobanka sano ee ugu horreeya ee Juun, marka baaluqu uu si liidata u korayo.
Diyaarinta slurry ee basbaas waxaa lagu fuliyaa ka qaybgalka digada digaaga. Gaadka koowaad waxaa la sameeyaa 14-15 maalmood ka dib markaad degto. Isla mar ahaantaana, digada isku qasan biyaha ee saamiga 1:15 waxaa lagu daraa slurry. Labada qayboodba waa isku dhafan waxayna ku shubeen 1 l oo lacag ah baadiyaha. Dib-u-quudinta - isla markiiba ka dib ubax, marka biyo yar oo macdanta adag ah lagu daro dheecaanka. Haddii xaalad ah Bisaylkiisa xun, habka seddexaad waa la sameeyaa (ka dib marka miraha ugu horreeya muuqday).
Ma taqaanaa? Hawlgalkii ugu horeeyay ee horumarinta agro-dhaqameedku wuxuu ahaa shaqada J. Van Helmont, oo ahaa 1630-kii. wax ka bartay geeddi-socodka quudinta dhirta biyaha. Waxyaabo badan oo ku saabsan luuqaddan aqoonta waxaa sameeyey M. M. Lomonosov iyo A. Lavoisier, kuwaas oo xiiseynayay saamaynta hawada on rhizomes ee noocyada kala duwan.
Under dabocase, Doodwanaag ee foomka dareere ah ayaa lagu shubay ka dib markii sariirta ayaa la khafiifiyey. 1 l oo dareere ah ayaa lagu daraa 8 l oo biyo ah, tani waa ku filan 8 mitir oo qiyaas ah.
Faa'iidooyinka isticmaalka slurry ee dalagyada beerta iyo beerta
Halabadani waxay leedahay dhowr faa'iido oo ka dhigi karta mid aan lagama maarmayn karin aag kasta:
Waa hagaagsan tahay dalagyada beeraha badankooda iyo geedo midho leh.
Si dhakhso ah u nuugay by dhirta iyada oo aan shaqo dheeraad ah.
Wuxuu ka caawiyaa geedo marxalad kasta oo horumar ah. Waxay kicinaysaa koritaanka "dhallinyarada" waxayna taageertaa dheelitirka nafaqada ee dhirta xooggan.
Badbaadada buuxda ee xalka iyada oo la ixtiraamayo qaybaha iyo hirgelinta saxda ah
Sababta ugu dambeysa waa faa iido aan macquul ahayn. Hab kasta oo nitrogenous ah (iyo slurry iyaga ka mid ah) haddii ay dhacdo soo bandhigid xad-dhaaf ah "shaqada" on mass cagaaran, iyo ma on horumarinta inflorescences iyo miraha. Tani waxay ku habboon tahay in la xusuusto marka la diyaarinayo falanqaynta.
Waxaan rajeyneynaa in macluumaadkani uu faa'iido u yeelan doono bilowga bannaanka, iyo xitaa beeralayda waayo-aragnimo leh waxay nasin doontaa daqiiqado yar oo xasuusta ah. Wax-soo-saarka wanaagsan!